Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Oo Duudsiyay Fasaxa 26ka Juun iyo Sharciyaqaannada Oo Naqdiyay | Yool News
Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Oo Duudsiyay Fasaxa 26ka Juun iyo Sharciyaqaannada Oo Naqdiyay
June 25, 2020 - Written by Yool News
Hargeysa(Yool)-Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Dawladda Somaliland ayaa sheegay in fasaxii 26ka Juun oo ku beegmay Jimce aan la qaadan doonin Sabtida, isaga oo ku sababeeyay in la qaadayo imtixaannada dawliga ah. Waxa tallaabadaas gef sharci ku sheegay garyaqaanno.
Dhanka kale wasaaradda shaqada, qoyska iyo arrimaha bulshada Somaliland ayaa sheegtay in shaqaalaha dawladdu fasax yihiin maalinta Sabtida, waxaana soo baxaya warar iska soo horjeeda.
Ugu horreyn Xoghayaha Guud ee ururka qareennada Somaliland Jamaal Xuseen Axmed (Mandeella) ayaa yidhi “Sharcigii maalin ba sidaynu qodob uga tagaynay ayaynu ka wada talaabsanay. Siday u dhici kartaa maalin qaran oo fasaxeeda sharcigu jideeyay in maalin shaqo laga dhigo.
Waa qayrul sharci. In imtixaan la qaado iyo in shaqo kale la qabto toona shaqaalaha dawlada xaq looguma laha.
Markaa intaa laga yimaado dhinaca siyaasadana marka aynu ka eegnana waxa ay ina tusaysaa sida maalinta 26 june ay quluubteena ugu fududahay. Waayo? hadii ay 18 may ahaaan lahayd dhamaanteen waynu la yaabi lahayn in la yidhaa imtixaan ayaa la qaadayaa ama shaqo kale ayaa la qabanayaa.
Waar kaadaya oo shuruucda dalka ha la dhawro”
Sidoo kale Garyaqaan Guuleed Dafac ayaa isna bartiisa Facebook ku qoray “26 June ma fasax baa loo quudhi waayay?
Fasaxu waa xaq shaqaale oo xeer dejiyay. Cid awood u leh inay qaado ama dhinto ma jirto. Shaqaalaha fasaxoodu yahay Jimcaha ay ku beegan tahay 26 June waxa ay xaq u leeyihiin fasaxa maalinta Sabtida ee xigta. Shaqaalaha hay’adaha qaar ee leh labo cisho oo fasax ah (Jimce iyo Sabti), waxa ay xaq u leeyihiin fasaxooda 26 June inay qaataa Axadda oo ay ku noqdaan shaqada Isniinta.
Ciddii duruuf gaar ah darteed ay iskula ogol yihiin loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhu inay shaqayso maallin Fasax Qaran, waxa ay xaq u leedahay in maallintaas fasax gadaal laga siiyo.
Haseyeeshee, dalka oo dhan ayaan loo ogolayn inay qaataan fasaxa Maallinta Madax-banaanida ee 26 June sharci maaha, waxa ku jiraana wax sahlan maaha”,
Qoraalka Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha ayaa duudsi ku ah xuquuqda shaqaalaha iyo maalmaha qaranka.